मातृका पोखरेल: साहित्यकार परिचयपत्र कार्यविधि बन्दै
कान्तिपुर दैनिक, वर्ष-२४, अंक -३३६, २०७३ माघ १२ गते बुधबार
अन्य सम्बन्धित समाचारहरु
लेखक-साहित्यकारलाई परिचयपत्र वितरणको तयारी
१५ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले लेखक-साहित्यकारलाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने तयारी गरेको छ ।
मुलुकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माणको तयारी भइरहेका बेला प्राज्ञिक क्षेत्रका निकायले साहित्यकारहरूलाई सम्मान र राहत महसुस गराउन यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रतिष्ठानको परिषद्को बैठकले परिचयपत्रको कार्यविधि तय गर्न प्राज्ञ सदस्य मातृका पोखरेलको संयोजकत्वमा सदस्यद्वय नर्मदेश्वरी सत्याल र श्रवण मुकारुङ रहेको समितिलाई जिम्मा दिएको छ ।
छिमेकी भारत र चीनमा पनि दीर्घ साधनारत लेखक साहित्यकारलाई सम्मान र सुविधाका लागि परिचयपत्र प्रदानको व्यवस्था छ ।
समितिका संयोजक पोखरेलले सरोकारवाला संस्था र व्यक्तिसँग छलफल गरेर कार्यविधि बनाउने र परिचयपत्र वितरणपछि सम्बन्धित स्रष्टालाई दिन सकिने सुविधाका बारेमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने बताए । राज्यले साहित्यकारलाई परिचयपत्रका आधारमा यातायात, स्वास्थ्य, घरजग्गा करजस्ता विषयमा छुट दिन सक्नेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपाल शाखाका अध्यक्ष राधेश्याम लेकालीले प्रतिष्ठानको सो निर्णय स्वागतयोग्य भएको भन्दै यस कार्यले लेखकहरू प्रज्ञा प्रतिष्ठानप्रति उदासिन रहेको अवस्थामा यसले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने बताए ।
समालोचक तथा अनुवादक युयुत्सु आरडी शर्माले भने प्रतिष्ठानको सो निर्णयलाई अर्थहीन कार्यको सङ्ज्ञा दिँदै यसले साहित्यलाई पञ्जीकरण र कारिन्दागिरीमा लान बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली गजल मञ्चका महासचिव घनेन्द्र ओझाका विचारमा स्रष्टालाई परिचयपत्र दिनु नराम्रो होइन तर त्यसको प्रयोजन स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिष्ठानको नवगठित नेतृत्वले भोलि आइतबार २९औँ प्राज्ञसभा बैठक गरी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दैछ । सभाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गर्ने कार्यक्रम छ । रासस
लेखक–साहित्यकारलाई परिचयपत्र वितरणको तयारी
काठमाडौं, १५ कात्तिक । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले लेखक–साहित्यकारलाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने तयारी गरेको छ । मुलुकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माणको तयारी भइरहेका बेला प्राज्ञिक क्षेत्रका निकायले साहित्यकारहरूलाई सम्मान र राहत महसुस गराउन यस्तो निर्णय गरेको हो ।
प्रतिष्ठानको यही कात्तिक १३ गतेको परिषद्को बैठकले परिचयपत्रको कार्यविधि तय गर्न प्राज्ञ सदस्य मातृका पोखरेलको संयोजकत्वमा सदस्यद्वय नर्मदेश्वरी सत्याल र श्रवण मुकारुङ रहेको समितिलाई जिम्मा दिएको छ ।
छिमेकी भारत र चीनमा पनि दीर्घ साधनारत लेखक साहित्यकारलाई सम्मान र सुविधाका लागि परिचयपत्र प्रदानको व्यवस्था रहेकाले नेपालमा पनि त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
समितिका संयोजक पोखरेलले सरोकारवाला संस्था र व्यक्तिसँग छलफल गरेर कार्यविधि बनाउने र परिचयपत्र वितरणपछि सम्बन्धित स्रष्टालाई दिन सकिने सुविधाका बारेमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने बताए ।
राज्यले साहित्यकारलाई परिचयपत्रका आधारमा यातायात, स्वास्थ्य, घरजग्गा करजस्ता विषयमा छुट दिन सक्नेछ । कतिपय मुलुकको यस्तो व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
समालोचक तथा अनुवादक युयुत्सु आरडी शर्माले भने प्रतिष्ठानको सो निर्णयलाई अर्थहीन कार्यको सङ्ज्ञा दिँदै यसले साहित्यलाई पञ्जीकरण र कारिन्दागिरीमा लाने तर्क राखे ।
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली गजल मञ्चका महासचिव घनेन्द्र ओझाका विचारमा स्रष्टालाई परिचयपत्र दिनु नराम्रो होइन तर त्यसको प्रयोजन स्पष्ट हुनुपर्छ ।
प्राज्ञ पोखरेलले भने स्रष्टाहरूले त्यस्तो व्यवस्था गर्नु पर्दैन भन्ने सुझावमा आफूहरु सोहीअनुसार अघिबढ्ने बताउँदै भने, ‘तर केही व्यक्ति विशेषको पूर्वाग्रह वा आग्रहका आधारमा हामीले निर्णय गर्ने होइन ।’
उनले विस्तृत छलफल र अध्ययनपछि मात्रै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिए ।
यसैबीच, प्रतिष्ठानको नवगठित नेतृत्वले भोलि आइतबार २९औँ प्राज्ञसभा बैठक गरी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दैछ । सभाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गर्ने कार्यक्रम छ ।
लेखक–साहित्यकारलाई परिचयपत्र वितरणको तयारि
काठमाडौर् , १६ कार्तिक । ने पाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले ले खक–साहित्यकार हरुलाई परि चयपत्र प्रदान गर्ने तयार ी गर े को छ । मुलुकमा र ाष्ट्रिय परि चयपत्र निर्माणको तयार ी भइर हे का बे ला प्राज्ञिक क्षे त्रका निकायले साहित्यकार हरूलाई सम्मान र र ाहत महसुस गर ाउन यस् तो निर्णय गर े को हो  ।
कार्तिक १३ गते बसे को प्रतिष्ठानको परि षद्को बै ठकले परि चयपत्रको कार्यविधि तय गर्न प्राज्ञ सदस् य मातृका पो खर े लको संयो जकत्वमा सदस् यद्वय नर्मदे श्वर ी सत्याल र श्रवण मुकारुङ र हे को समितिलाई जिम्मा दिएको छ । छिमे की भार त र चीनमा पनि दीर्घ साधनार त ले खक साहित्यकार लाई सम्मान र सुविधाका लागि परि चयपत्र प्रदानको व्यवस् था र हे काले ने पालमा पनि त्यस् तो व्यवस् था गर्न लागिएको हो  ।
समितिका संयो जक पो खर े लले सर ो कार वाला संस् था र व्यक्तिस“ग छलफल गर े र कार्यविधि बनाउने र परि चयपत्र वितर णपछि सम्बन्धित स्रष्टालाई दिन सकिने सुविधाका बार े मा सर कार लाई सिफारि स गर्ने बताउनुभयो  । र ाज्यले साहित्यकार लाई परि चयपत्रका आधार मा यातायात,स् वास् थ्य, घर जग्गा कर जस् ता विषयमा छुट दिन सक्ने छ । कतिपय मुलुकको यस् तो व्यवस् था र हे को पाइन्छ ।
अन्तरर् ाष्ट्रिय ने पाली साहित्य समाज ने पाल शाखाका अध्यक्ष र ाधे श्याम ले कालीले प्रतिष्ठानको सो निर्णय स् वागतयो ग्य भएको भन्दै यस कार्यले ले खकहरू प्रज्ञा प्रतिष्ठानप्रति उदासिन र हे को अवस् थामा यसले सकार ात्मक परि वर्तन ल्याउने बताउनुभयो  । समालो चक तथा अनुवादक युयुत्सु आर डी शर्माले भने प्रतिष्ठानको सो निर्णयलाई अर्थहीन कार्यको संज्ञा दिदै यसले साहित्यलाई पञ्जीकर ण र कारि न्दागिर ीमा लाने तर्क र ाख्नुभयो  ।
अन्तरर् ाष्ट्रिय ने पाली गजल मञ्चका महासचिव घने न्द्र ओ झाका विचार मा स्रष्टालाई परि चयपत्र दिनु नर ाम्रो हो इन तर त्यसको प्रयो जन स् पष्ट हुनुपर्छ । प्राज्ञ पो खर े लले भने स्रष्टाहरूले त्यस् तो व्यवस् था गर्नुपर्दै न भन्ने सुझावमा आफूहरू सो हीअनुसार अघिबढ्ने बताउ“दै भन्नुभयो – ‘तर के ही व्यक्ति विशे षको पूर्वाग्रह वा आग्रहका आधार मा हामीले निर्णय गर्ने हो इन ।’ उहा“ले विस् तृत छलफल र अध्ययनपछि मात्रै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकार ी दिनुभयो  ।
लेखक–साहित्यकारको सम्मानको लागि प्रतिष्ठानले परिचयपत्र वितरण गर्ने
काठमाडौ कात्तिक १५, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले लेखक साहित्यकारलाई सम्मान र सुविधाका लागि छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा जस्तै परिचयपत्र प्रदान गर्ने तयारी गरेको छ । मुलुकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माणको तयारी भइरहेका बेला प्राज्ञिक क्षेत्रका निकायले साहित्यकारहरूलाई सम्मान र राहत महसुस गराउन यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रतिष्ठानको यही कात्तिक १३ गतेको परिषद्को बैठकले परिचयपत्रको कार्यविधि तय गर्न प्राज्ञ सदस्य मातृका पोखरेलको संयोजकत्वमा सदस्यद्वय नर्मदेश्वरी सत्याल र श्रवण मुकारुङ रहेको समितिलाई जिम्मा दिएको बुझिएको छ।
क–कसले पाउँदैछन लेखक–साहित्यकार राष्ट्रिय पुरस्कार ?
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले लेखक–साहित्यकारलाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने तयारी गरेको छ । मुलुकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माणको तयारी भइरहेका बेला प्राज्ञिक क्षेत्रका निकायले साहित्यकारहरूलाई सम्मान र राहत महसुस गराउन यस्तो निर्णय गरेको हो ।
प्रतिष्ठानको यही कात्तिक १३ गतेको परिषद्को बैठकले परिचयपत्रको कार्यविधि तय गर्न प्राज्ञ सदस्य मातृका पोखरेलको संयोजकत्वमा सदस्यद्वय नर्मदेश्वरी सत्याल र श्रवण मुकारुङ रहेको समितिलाई जिम्मा दिएको छ । छिमेकी भारत र चीनमा पनि दीर्घ साधनारत लेखक साहित्यकारलाई सम्मान र सुविधाका लागि परिचयपत्र प्रदानको व्यवस्था रहेकाले नेपालमा पनि त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
समितिका संयोजक पोखरेलले सरोकारवाला संस्था र व्यक्तिसँग छलफल गरेर कार्यविधि बनाउने र परिचयपत्र वितरणपछि सम्बन्धित स्रष्टालाई दिन सकिने सुविधाका बारेमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने बताए । राज्यले साहित्यकारलाई परिचयपत्रका आधारमा यातायात, स्वास्थ्य, घरजग्गा करजस्ता विषयमा छुट दिन सक्नेछ । कतिपय मुलुकको यस्तो व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपाल शाखाका अध्यक्ष राधेश्याम लेकालीले प्रतिष्ठानको सो निर्णय स्वागतयोग्य भएको भन्दै यस कार्यले लेखकहरू प्रज्ञा प्रतिष्ठानप्रति उदासिन रहेको अवस्थामा यसले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने बताए । समालोचक तथा अनुवादक युयुत्सु आरडी शर्माले भने प्रतिष्ठानको सो निर्णयलाई अर्थहीन कार्यको सङ्ज्ञा दिँदै यसले साहित्यलाई पञ्जीकरण र कारिन्दागिरीमा लाने तर्क गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली गजल मञ्चका महासचिव घनेन्द्र ओझाका विचारमा स्रष्टालाई परिचयपत्र दिनु नराम्रो होइन तर त्यसको प्रयोजन स्पष्ट हुनुपर्छ । प्राज्ञ पोखरेलले भने स्रष्टाहरूले त्यस्तो व्यवस्था गर्नु पर्दैन भन्ने सुझावमा आफूहरु सोहीअनुसार अघिबढ्ने बताए । उनले भने “तर केही व्यक्ति विशेषको पूर्वाग्रह वा आग्रहका आधारमा हामीले निर्णय गर्ने होइन ।”
यसैबीच, प्रतिष्ठानको नवगठित नेतृत्वले आइतबार २९औँ प्राज्ञसभा बैठक गरी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दैछ । सभाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गर्ने कार्यक्रम छ ।
काठमाडौं : चलचित्र कलाकारलाई परिपत्र दिइने चर्चा सेलाउन नपाउँदै लेखक साहित्यकारलाई पनि परिचयपत्र दिन एक अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ। बिहीबार बसेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रज्ञा परिषद्को बैठकले ‘लेखक परिचयपत्र वितरण समिति’ गठन गरेको हो।
प्राज्ञ मातृका पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्राज्ञ नर्मदेश्वरी सत्याल र श्रवण मुकारुङ रहेका छन्। समितिले डेढ महिनामित्र सुझाव प्रस्तुत गर्ने संयोजक पोखरेलले अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई बताए। ‘परिचयपत्र कार्यान्वयनका लागि त एक डेढ वर्ष लाग्ला’, उनले भने।
खासगरी भारत भ्रमणका समयमा प्राज्ञले त्यहाँको केन्द्रीय र राज्यस्तरीय प्रतिष्ठानले लेखक, साहित्यकारलाई परिचयपत्र दिएको अनुभवका आधारमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पनि त्यसअनुसार काम गर्ने अवधारणा ल्याएको उनले बताए। ‘मलाई कथाकार भन्छन्, त्यो त साथीहरूले कथा लेखेको आधारमा भनेका हुन्’, गद्य विभाग प्रमुखसमेत रहेका पोखरेलले भने, ‘तर सरकारी रुपमा स्रष्टाको पहिचान खोइ त?’
पोखरेलका अनुसार यसका लागि सबभन्दा पहिले विभिन्न साहित्यिक संस्थासँग सुझाव लिइने, विदेशका विभिन्‍न अनुभवको अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव दिइनेछ। सुझावका आधारमा परिचयपत्र वितरणको आधार तय हुने विश्वास गरिएको छ। परिचयपत्र हुँदा साहित्यकारलाई के फाइदा हुन्छ त?
उनले भने, ‘परिचयपत्रका आधारमा भारतका लेखक साहित्यकार अस्पताल तथा रेलमा सुविधाका लागि दाबी गरेको पाइएको छ। फेरि लेखक साहित्यकार भनेर राज्यले पनि त चिन्‍नु पर्‍यो नि!’
http://hamronewyork.com बाट साभार
लेखक–साहित्यकारहरूको आधार के?
– दीर्घलाल केसी
नेपालमा शिक्षक, चिकित्सक, सेना, सिपाहीं र कर्मचारीको तथ्याङ्क हुनुपर्छ। उनीहरूको तथ्याङ्कझैं लेखक र साहित्यकारहरूको तथ्याङ्क बनाउनु नराम्रो होइन। कहिलेकाहीं सरकारसँग देशमा कति मजदुर र किसान छन् त्यसको सङ्ख्या नै नभएको लाजमर्दो कुरा सुन्नुपर्छ। राज्यसँग हरेकको तथ्याङ्क हुनुपर्छ, बनाउनुपर्छ। कुनै तथ्याङ्कले कुन देश कहाँ छ, कहाँ पुग्यो भन्ने थाहा हुन्छ। देशमा कति वैज्ञानिक छन्, वैज्ञानिकहरू के गरिरहेका छन्, सरकारले वैज्ञानिकहरूलाई कसरी उपयोग गरिरहेको छ, वैज्ञानिकहरू विज्ञानको खोजीमा या नयाँ नयाँ कुरा पत्ता लगाउन, आविष्कार गर्न खटेका छन् कि छैनन्? चिन्तनमनन गर्नुपर्ने हो।
नेपाल विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा पछाडि छ। विज्ञान र प्रविधिमा पछि पर्नु नेपालको विकास पछि पर्नु हो। वैज्ञानिक र प्राविधिज्ञबारे नेपाल सरकारलाई चासो छैन, थाहा छैन भने उनीहरूको उपयोग भइरहेको छ भन्ने कुरा कसरी विश्वास गर्ने? तथ्याङ्क भएर पनि उपयोग गरिंदैन भने सरकारको के मतलब ! सरकार भनेको मन्त्री र प्रधानमन्त्री सिंहासनमा बस्नु होइन। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले लेखक – साहित्यकारलाई परिचय प्रदान गर्ने तयारी गरिरहेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तयार गर्न मातृका पोखरेलको संयोजकत्वमा नर्मदेश्वरी सत्याल र श्रवण मुकारुङ रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। भारत र चीनमा लेखक–साहित्यकारलाई सम्मान र सुविधाका लागि परिचय पत्र प्रदान गरिएको हुँदा नेपालमा पनि सोकेा व्यवस्था गर्न लागेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको दाबी छ।
लेखक–साहित्यकारहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु राम्रो जस्तो हुन्छ तर कसरी गर्ने, के को आधारमा लेखक–साहित्यकार मान्ने? कुनै कवि, कथाकार, निबन्धकार, नाटककारले कृति प्रकाशन गरेपछि मात्रै साहित्यकार हुने हो कि ! अनुवाद गर्ने, समालोचना गर्ने, अनुवादक र समालोचकहरूले पनि कृति नै निकाल्नुपर्ने हो कि ! लेखकको मापदण्ड के हुने? निरन्तर कथा, कविता, निबन्ध, नाटक लेखिरहने, समालोचना, अनुवाद गरिरहने, अनेक साहित्यिक र अन्य नाउँमा लेख लेखिरहने व्यक्तिहरू लेखक साहित्यकारमा गनिन्छ कि गनिंदैन? राज्यले पनि लेखक–साहित्यहरूलाई खासै सम्मान गरेको पाउँदैन। कति लेखक–साहित्यकारले आर्थिक समस्याको कारण रचिसकेका साहित्यहरूको निकाल्न सकेका छैनन्। प्रज्ञा प्रतिष्ठानले लिने लेखक–साहित्यकारहरूको तथ्याङ्क के सही होला? के देशभरका लेखक र साहित्यकारहरूको नाम सङ्कलन गरिएला? लेखक र साहित्यकारहरूको मापदण्ड केलाई मान्ने? मापदण्ड तयार नहुँदै सङ्कलन गरिएको लेखक–साहित्यकारहरूको सही नाउँ आउला?
http://majdoor.com.np बाट साभार
मुलुकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माणको तयारी भइरहेका बेला प्राज्ञिक क्षेत्रका निकायले साहित्यकारहरूलाई सम्मान र राहत महसुस गराउन यस्तो निर्णय गरेको हो ।काठमाण्डु, १५ कात्तिक – नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले लेखक–साहित्यकारलाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने तयारी गरेको छ ।प्रतिष्ठानको यही कात्तिक १३ गतेको परिषद्को बैठकले परिचयपत्रको कार्यविधि तय गर्न प्राज्ञ सदस्य मातृका पोखरेलको संयोजकत्वमा सदस्यद्वय नर्मदेश्वरी सत्याल र श्रवण मुकारुङ रहेको समितिलाई जिम्मा दिएको छ ।छिमेकी भारत र चीनमा पनि दीर्घ साधनारत लेखक साहित्यकारलाई सम्मान र सुविधाका लागि परिचयपत्र प्रदानको व्यवस्था रहेकाले नेपालमा पनि त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।समितिका संयोजक पोखरेलले सरोकारवाला संस्था र व्यक्तिसँग छलफल गरेर कार्यविधि बनाउने र परिचयपत्र वितरणपछि सम्बन्धित स्रष्टालाई दिन सकिने सुविधाका बारेमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने बताए ।राज्यले साहित्यकारलाई परिचयपत्रका आधारमा यातायात, स्वास्थ्य, घरजग्गा करजस्ता विषयमा छुट दिन सक्नेछ ।
कतिपय मुलुकको यस्तो व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपाल शाखाका अध्यक्ष राधेश्याम लेकालीले प्रतिष्ठानको सो निर्णय स्वागतयोग्य भएको भन्दै यस कार्यले लेखकहरू प्रज्ञा प्रतिष्ठानप्रति उदासिन रहेको अवस्थामा यसले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने जानकारी दिए ।समालोचक तथा अनुवादक युयुत्सु आरडी शर्माले भने प्रतिष्ठानको सो निर्णयलाई अर्थहीन कार्यको सङ्ज्ञा दिँदै यसले साहित्यलाई पञ्जीकरण र कारिन्दागिरीमा लाने तर्क राखे ।अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली गजल मञ्चका महासचिव घनेन्द्र ओझाका विचारमा स्रष्टालाई परिचयपत्र दिनु नराम्रो होइन तर त्यसको प्रयोजन स्पष्ट हुनुपर्छ ।प्राज्ञ पोखरेलले भने स्रष्टाहरूले त्यस्तो व्यवस्था गर्नु पर्दैन भन्ने सुझावमा आफूहरु सोहीअनुसार अघिबढ्ने बताउँदै भने, “तर केही व्यक्ति विशेषको पूर्वाग्रह वा आग्रहका आधारमा हामीले निर्णय गर्ने होइन ।”उनले विस्तृत छलफल र अध्ययनपछि मात्रै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिए ।यसैबीच, प्रतिष्ठानको नवगठित नेतृत्वले भोलि आइतबार २९औँ प्राज्ञसभा बैठक गरी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दैछ । सभाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गर्ने कार्यक्रम छ ।
Posted by मातृका पोखरेल at 10:32 PM